Waa Maxay Dawladdi? WQ Axmed-xiis Dharbaan | Kaafi News
Waa Maxay Dawladdi? WQ Axmed-xiis Dharbaan
Wakhtigaas Alexandre waxa uu ahaa arday, Aristotle ayaa u ahaa macalin. Casharka ugu wayn ee uu ka guntayna waxa uu ahaa:
Philib talo waa ay ka baahday. Shawrka naftiisa waxa maqashay Afadisii. Olympias waxa ay daalacatay xaajigu in uusan ka hadhin dareenkii dumarka; damacaana waxa ay
ka meel dhigatay dabin.
Taarikh ahaan durug, dhul ahaana soo dhowoow. Quraanku wuxu ina faray gabadh boqorad ahayd oo ku noolayd Yemen. Gabadhaasi, waa Bilkhiis’e waxa ay maamuli jirtay dhul u dhexeeya laba wabi. Ethiopianka haddii aad waydiisid dawlad-nimadu xagay idinka soo gashay? Si midaysan oo kalsooni leh, waxa ay ku odhanayaan ”Dawladda Ethiopia waxa ay kasoo farcantay Magalada Yeha; abqaalkeeda waxa lahayd Bilkhis oo Yemen nooga timid”